नेप्से परिसूचक ४५ दशमलव १२ अङ्कले घट्यो
साताको पहिलो दिनदेखि घटेको बजारमा अन्तिम व्यापार दिनमा पनि ओरालो लागेको छ । परिसूचक लगातार घटिरहेपछि लगानीकर्ताहरु आत्तिएका छन् । जसका कारण बजारमा सेलिङ प्रेसर बढेको हो । विहीबार सूचकमा कमी देखिएपनि कारोबार रकम भने १७ प्रतिशतले बढेको हो । कारोबार रकमसँगै शेयर सङ्ख्या, कारोबार सङ्ख्या र कारोबार भएका कम्पनीमा पनि बृद्धि देखिएको छ ।
नेप्से बजार घट्ने क्रम कायमै; १२ दसमलब ७५ अंकको गिरावट
बिगत केहि दिन देखि ओरालो लागेको नेप्से बजार आज पुन तल झरेको छ । बुधबार नेप्से परिसूचक १२ दशमलव ७५ अङ्कले घटेको छ । यस व्यापार दिनमा बजार शून्य दशमलव ७० प्रतिशतले घटेर १ हजार ८ सय १३ दशमलव ७२ विन्दुमा पुगेर बन्द भएको हो । नेप्सेमा रू. १ अर्ब २८ करोडको शेयर कारोबार भएको छ भने कुल बजार पूँजीकरण रू. १९ खर्ब ९८ अर्ब पुगेको हो ।
नेप्से बजार १८ दशमलव ९४ अङ्कले घट्यो
बिगत केहि दिन देखि घटिरहेको नेप्से बजार आज पुन घटेको छ । लगातार उच्च बङ्कले बढेको बजारमा लगानीकर्ताहरु प्रोफिट बुकिङ गर्नतर्फ मोडिएपछि बजार घटिरहेको विश्लेषकको भनाइ छ । बजार सूचकसँगै कारोबार रकममा पनि २३ प्रतिशतको गिरावट भएको छ ।
नेप्से परिसूचक २८ दशमलब ०१ अंकले वृद्धि
मङ्गलबार नेप्से परिसूचक १ दशमलव ५२ प्रतिशत बृद्धि भएको छ । सो दिन २८ दशमलव शून्य १ अंकले बढेर १ हजार ८ सय ६६ दशमलव ५० विन्दुमा पुगेर बन्द भएको हो । उत्पादन तथा प्रशोधन समूह बाहेक सबै समूहको परिसूचक बढेपछि शेयर बजार उकालो लागेको हो । यस दिन ३ कम्पनीको शेयरमूल्य १० प्रतिशतले बढेको छ भने अन्य २८ कम्पनीको शेयरमूल्य १० प्रतिशतको हाराहारीमा बढेको छ ।
६ वर्षअघिको प्रसंग हो, रसुवा, धैबुङ–४ का दशरथ देवकोटाले घन्टौँ लाइनमा लागेर चिलिमे जलविद्युत् आयोजनामा सेयरका लागि आवेदन दिए । २० मेगावाट क्षमताको आयोजनाका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले स्थापना गरेको चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनीले आवश्यक पुँजी जुटाउन साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गरेको थियो । गाउँघरका सबैले चासो देखाएपछि उनले पनि सेयरका लागि आवेदन दिएका थिए ।
नेप्से परिसूचक १३ दशमलब ६३ अंकले घट्यो
बुधबार नेप्से परिसूचक १३ दशमलब ६३ अंकले घट्यो छ। यस दिन नेप्से परिसूचक मा करेक्सन भएको छ । अघिल्लो ४ दिनमा १ सय १० अङ्कले बढेको नेप्से परिसूचक बुधबार भने ओरालो लागेको हो । यस दिन नेप्से परिसूचक रिभर्स भएको छ । मङ्गलबार परिसूचक जति अङ्कले बढेको थियो यस दिन बजार सोहि अङ्कले घटेको हो । नेप्से परिसूचक घटे लगतै करोबार रकम पनि घटेको छ ।
नेप्से परिसूचक ४० दशमलव ८३ अङ्कले वृद्धि
सोमबार नेप्से परिसूचक ४० दशमलव ८३ अङ्कले बढेको छ । यस दिन वीमा समूहको परिसूचकमा उच्च प्रतिशतको बृद्धि भएपछि शेयर बजार दोब्बर अङ्कले बढेको हो । कारोबार खुले देखि चार घण्टाको व्यापार अवधिमा नेप्से २ दशमलव ३४ प्रतिशतले बढेर १ हजार ७ सय ८६ दशमलव ५७ विन्दुमा पुगेको हो ।
नेप्से बजार २ दशमलब ६४ अंकले घट्यो
बुधवार पनि नेप्सेमा उतारचढाव कायम रहेको छ । १ हजार ६ सय ९३ विन्दुबाट शुरु भएको कारोबार एक घण्टामा न्यून विन्दु १ हजार ६ सय ७१ लाई छोएर फर्केको थियो । बुधवार कारोबारमा आएका १ सय ४३ कम्पनीमध्ये ३७ कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ, ९४ कम्पनीको शेयरमूल्य घटेको छ भने १२ कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर रहेको छ । सो दिन नेप्सेको एडी रेशियो शून्य दशमलव ३९ रहेको छ ।
नेप्से २०.२६ अङ्क घट्यो
साताको दोस्रो दिन नेप्से परिसूचक २० दशमलव २६ अङ्क घटेको छ । बजार खुलदेखि उकालो लाग्न थालेको नेप्से परिसूचक ३५ मिनेटको व्यापारमा दिनभरीकै उच्च विन्दु १ हजार ७ सय २७ दशमलव ३७ विन्दुमा पुग्न सफल भएको थियो । त्यसपछि विस्तारै ओरालो लाग्न थालेको नेप्से परिसूचक १ हजार ७ सय २ दशमलव २७ मा पुगेर बजार बन्द भयो । यो अघिल्लो दिनको तुलनामा १ दशमलव १८ प्रतिशत कम हो ।
६.८१ अङ्कले बढ्यो नेप्से बजार
साताको पहिलो दिन नेप्से परिसूचक ६ दशमलव ८१ अङ्क बढेको छ । बजार खुलेदेखि उकालो लाग्न थालेको नेप्से परिसूचक १ घण्टाको व्यापारमा दिनभरी कै उच्च विन्दु १ हजार ७ सय ३२ मा पुग्न सफल भएको थियो । त्यसपछि विस्तारै ओरालो लागेको नेप्से परिसूचक १ हजार ७ सय २२ दशमलव ५३ विन्दुमा पुगेर बजार बन्द भयो । यो अघिल्लो दिनको तुलनामा शून्य दशमलव ४० प्रतिशत बढी हो ।
यस साताको नेप्से बजार ३.४८ अङ्कले घट्यो
गत साताको नेप्से परिसूचक ३ दशमलव ४८ अङ्कले घटेको थियो । बढिरहेको शेयर बजारमा गत साता भने सामान्य करेक्सन देखा परेको छ । आइतबार १ हजार ७ सय १९ दशमलव २ विन्दुमा रहेको नेप्से परिसूचक साताको अन्तिम व्यापार दिन विहीबार घटेर १ हजार ७ सय १५ दशमलव ७२ विन्दुमा पुगेको थियो । गत साता ‘क’ वर्गका कम्पनीहरुको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स पहिलो दिनको तुलनामा...
नेप्से परिसूचक २ दशमलव ६९ अङ्कले वृद्धि
बुधवार नेप्से परिसूचक २ दशमलव ६९ अङ्कले बढेको छ । मध्याह्नमा १ हजार ७ सय २३ दशमलव १३ विन्दुमा पुग्न सफल भएको बजार केही बढेको हो । बजार बन्द हुँदा नेप्से १ हजार ७ सय १५ दशमलव ७२ विन्दुमा आइपुगेको छ । यो अघिल्लो दिनको तुलनामा शून्य दशमलव १६ प्रतिशत बढी हो । असार मसान्त अन्त्य हुँदै गर्दा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था फाइनान्सियल क्योजिङमा लागेकाले यो समय कम कर्जा प्रवाह हुने गर्दछ ।
नेप्से परिसूचक ४ दशमलव शून्य ३ अङ्कले वृद्धि
साताको पहिलो दिन नेप्से परिसूचक ४ दशमलव शून्य ३ अङ्कले घटेको छ । यस दिन नेप्से परिसूचक शून्य दशमलव २३ प्रतिशतले घटेर १ हजार ७ सय १९ दशमलव २० विन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ । नेप्सेमा रू. १ अर्ब ८५ करोड बराबरको शेयर कारोबार भएको छ भने रू. १८ खर्ब ५३ अर्बको कुल बजार पूँजीकरण भयो । नेप्सेको एडी रेशियो १ दशमलव २५ अङ्क रहेको छ । यसले बजार बुलिश प्रवृत्तिमा रहेको देखाउँछ ।
नेप्से परिसूचक १.३६ अङ्क घट्यो
साप्ताहिक व्यापारको अन्तिम दिन नेप्से परिसूचक १ दशमलव ३६ अङ्कले घटेको छ । पहिलो साढे ३ मिनेटमा यस दिनको उच्च विन्दु १ हजार ७ सय ३४ दशमलव २१ मा पुगेको परिसूचक साढे १ घण्टाको व्यापारसम्ममा ओरालो लागेर १ हजार ७ सय ७ दशमलव ६७ विन्दुमा ओर्लिएको थियो । तर, अन्तिम साढे १ घण्टाको व्यापारमा भने परिसूचक पुनः बढेर १ हजार ७ सय २३ दशमलव २३ विन्दु बजार बन्द भयो ।
नेप्से परिसूचक शून्य दशमलव ४० अङ्कले वृद्धि
बुधबार नेप्से परिसूचक शून्य दशमलव ४० अङ्कले बढेको छ । पहिलो २० मिनेट भित्र यस दिनको उच्च विन्दु १ हजार ७ सय ३२ मा पुगेको परिसूचक केही समय मै ओरालो लाग्न थालेको थियो । नेप्से परिसूचक दिन भरीको व्यापारमा शून्य दशमलव शून्य २ प्रतिशतले बढेर १ हजार ७ सय २४ दशमलव ५९ विन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ । शेयर बजारको परिसूचक घट्नबाट बचेपनि कारोबार रकममा भने सामान्य गिरावट देखापरेको छ ।
११.३५ अङ्कले बढ्यो नेप्से परिसूचक
मङ्गलबार नेप्से परिसूचक ११ दशमलव ३५ अङ्कले बढेको छ । यस दिन पहिलो १ घण्टा नबित्दै १ हजार ७ सय ३२ विन्दुमा ‘डबल टप’ बनाएर घटेको परिसूचक पुनः बढ्ने क्रममा देखिएको छ । मध्यान्तरको कारोबारमा बजार यस दिनको न्यून १ हजार ७ सय ११ मा पुगेको थियो । नेप्से परिसूचक दिनभरिको व्यापारमा शून्य दशमलव ६६ प्रतिशतले बढेर १ हजार ७ सय २४ दशमलव १९ विन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ ।
नेप्से परिसूचक ३६ दशमलव ६ अङ्कले वृद्धि
सोमबार नेप्से परिसूचक ३६ दशमलव ६० अङ्कले बढेको छ । कारोबार शुरु भएको पहिलो ७ मिनेटको व्यापारमा नेप्स परिसूचकले फेरी नँया रेकर्ड कायम गरेको छ । केही समययता बुलिश ट्रेण्डमा चलिरहेको नेप्से यस दिन सबैभन्दा उच्च विन्दुमा पुगेको हो । यस दिन लगानीकर्ताहरुको आकर्षण वाणिज्य बैङ्कतर्फ बढेको देखिन्छ ।
यस साताको नेप्से ४४.०२ अङ्कले वृद्धि
यस साताको नेप्से परिसूचक ४४ दशमलव शून्य २ अङ्कले बढेको थियो । यस साता नेप्से परिसूचक सबै भन्दा उच्च विन्दु १ हजार ७० मा पुगेर फर्किएको थियो । आइतबार १ हजार ६ सय २२ दशमलव २७ विन्दुमा रहेको नेप्से परिसूचक साताको अन्तिम व्यापार दिन विहीबार बढेर १ हजार ६ सय ६६ दशमलव २९ विन्दुमा पुगेको थियो ।
नेप्से परिसूचक १८ दशमलव ७८ अङ्कले वृद्धि
साताको अन्तिम व्यापार दिनमा नेप्से परिसूचक १८ दशमलव ७८ अङ्कले बढेको छ । बजार खुलेको पहिलो आधा घण्टामा १ हजार ६ सय ६४ विन्दुमा पुगेको नेप्से ओरालो लागेर पुनः बढेको बजार अन्तिम समयमा उच्च विन्दु १ हजार ६ सय ७० विन्दुमा पुगेको थियो । यस दिनको इण्ट्रा डे भित्र नेप्से परिसूचक १ दशमलव १४ प्रतिशतले बढेर १ हजार ६ सय ६६ दशमलव २९ विन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ ।
नेप्से परिसूचक १८ दशमलव ७ अङ्कले वृद्धि
बुधबार नेप्से परिसूचक १८ दशमलव ७ अङ्कले बढेको छ । पहिलो १० मिनेटको कारोबारमा १ हजार ६ सय ५१ हाल सम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको नेप्से परिसूचक त्यसपछिको समयमा भने केही ओरालो लागेको थियो । मध्यान्तरमा स्थिर रहेको नेप्से दिन भरीको व्यापारमा १ दशमलव १५ प्रतिशतले बढेर १ हजार ६ सय ४७ दशमलव ५१ विन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ ।
नेप्से परिसूचक १३.७१ अङ्कले वृद्धि
मङ्गलबार नेप्से परिसूचक १३ दशमलव ७१ अङ्कले बढेको छ । जलविद्युत र बीमा समूहको परिसूचक उच्च अङ्कले बढेपछि नेप्से परिसूचक बढ्नमा टेवा पुगेको हो । यस दिन कारोबार खुले देखी उकालो लागेको नेप्से परिसूचक दिन भरीको व्यापारमा शून्य दशमलव ८५ प्रतिशतले बढेर १ हजार ६ सय २८ दशमलव ८१ विन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ ।
साताको पहिलो दिन नेप्से परिसूचक १०.६७ अङ्कले घट्यो
साताको पहिलो दिन नेप्से परिसूचक १०.६७ अङ्कले घटेको छ । कारोबार शुरु भएदेखि घटेर १ हजार ६ सय १७ को न्यून विन्दुमा पुगेको नेप्से परिसूचक मध्यान्तरमा बढेर १ हजार ६ सय ३७ उच्च विन्दुमा पुगेको थियो । नेप्सेमा रू. १ अर्ब ६५ करोड बराबरको शेयर कारोबार भएको छ भने रू. १७ खर्ब ४० अर्बको कुल बजार पूँजीकरण भयो ।
साताको नेप्से ३४.९८ अङ्कले वृद्धि
यस साताको नेप्से परिसूचक ३४ दशमलव ९८ अङ्कले वृद्धि भएको छ। साताभरि नेप्से परिसूचक हरेक दिन नयाँ उचाई छुने क्रममा लागिपरको थियो । अहिलेको शेयर बजार बुलिश रनमा अगाडि बढिरहको छ । गत साता कारोबार रकमले पनि रेकर्ड ब्रेक गर्‍यो । साप्ताहिक पाँच व्यापार दिन नै नेप्से परिसूचक बढेको थियो ।
नेप्से परिसूचक ६ दशमलव ३२ अङ्कले वृद्धि
बुधबार नेप्से परिसूचक ६ दशमलव ३२ अङ्कले बढेको छ । ‘इण्ट्रा डे’ भित्र निकै उतार चढावमा कारोबार भईरहेको बजार १ हजार ६ सय २० दशमलव ४७ को उच्च विन्दुमा पुगेर टुगिङ्एको छ । यस दिन नेप्सेमा रू. १ अर्ब ३९ करोड बराबरको शेयर कारोबार भएको छ भने रू. १७ खर्ब ४७ अर्बको कुल बजार पूँजीकरण भयो ।
नेप्से परिसूचक ११ दशमलव ६३ अङ्कले वृद्धि
साताको दोस्रो दिन नेप्से परिसूचक ११ दशमलव ६३ अङ्कले बढेको छ । बजार खुलेदेखि उकालो लाग्न थालेको नेप्से परिसूचक अन्तरदिनको कारोबारमा हालसम्म कै उच्च विन्दु १ हजार ६ सय २५ दशमलव ८२ विन्दुमा पुगेर बाटो परिवर्तन गरी ओरालो लागेको थियो । पुनः उकालो लागेको नेप्से १ हजार ६ सय ९ दशमलव ५९ विन्दुमा पुगेर बजार बन्द भयो ।
नेप्से परिसूचक ३१ दशमलव २६ अङ्कले वृद्धि
साताको पहिलो दिन नेप्से परिसूचक २ प्रतिशतले बढेको छ । नेप्से परिसूचक दिनभरको कारोबारमा हालसम्म कै उच्च विन्दु १ हजार ६ सय १ दशमलव ७७ विन्दुमा पुग्न सफल भएको थियो । त्यसपछि, सामान्य उतार चढाव भइ रहेको नेप्से परिसूचक आइतवार १ हजार ५ सय ९७ दशमलव ९६ विन्दुमा पुगेर बजार बन्द भयो । यस दिन नेप्से बजार ३१ दशमलव २६ अङ्कले वृद्धि भएको छ।
नेप्से परिसूचक १९ दशमलव ९० अङ्कले वृद्धि
साप्ताहिक व्यापारको अन्तिम दिन नेप्से परिसूचक १९ दशमलव ९० अङ्कले बढेको छ । नेप्से दिनभरिको व्यापारमा १ दशमलव २९ प्रतिशतले बढेर १ हजार ५ सय ६६ दशमलव ७० विन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ । नेप्सेमा रू. १ अर्ब ८९ करोड बराबरको शेयर कारोबार भएको छ भने रू. १६ खर्ब ८९ अर्बको कुल बजार पूँजीकरण भयो ।
१२ दशमलव ३८ अंकले नेप्से परिसूचक वृद्धि
बुधबार नेप्से परिसूचक १५ दशमलव ३१ अङ्कले बढेको छ । एकै दिनमा बजार पूँजीकरणमा १२ दशमलव ३८ प्रतिशतको कमि देखापरेको छ । नेप्सेमा रू. १ अर्ब २९ करोड बराबरको शेयर कारोबार भएको छ भने रू. १६ खर्ब ६७ अर्बको कुल बजार पूँजीकरण भयो । अधिकांश वीमा कम्पनीहरुको शेयर कारोबार तथा मूल्य उच्च दरले बढेपछि वीमा समूहको परिसूचक ८ हजारको विन्दुमा पुगेको छ ।
नेप्से १४.६९ अङ्कले वृद्धि
मङ्गलबार नेप्से परिसूचक १४ दशमलव ६९ अङ्कले बढेको छ । नेप्से परिसूचक दिन भरीको व्यापारमा शून्य दशमलव ९७ प्रतिशतले बढेर १ हजार ५ सय ३१ दशमलव ४९ विन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ । नेप्सेमा रू. १ अर्ब १४ करोड बराबरको शेयर कारोबार भएको छ भने रू. १९ खर्ब ३ अर्बको कुल बजार पूँजीकरण भयो । यस दिन होटल समूह र जलविद्युत समूह बाहेक सबै समूहको परिसूचक....
नेप्से बजार ३३ अङ्कले बृद्धि
सोमबार नेप्से परिसूचक ३३ दशमलव ६६ अङ्कले बढेको छ । यस दिन कारोबार नेप्से परिसूचक दिन भरीको कारोबारमा २ दशमलव २७ प्रतिशतले बढेर १ हजार ५ सय १६ दशमलव ८० विन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ । यस दिन बजार पूँजीकरणमा रू.२ खर्बको बृद्धि भएको छ । नेप्सेमा रू.१ अर्ब १५ करोड बराबरको शेयर कारोबार भएको छ भने रू.१८ खर्ब ८३ अर्बको कुल बजार पूँजीकरण भयो ।